Redmi Buds 3 Pro, waxaan falanqeyneynaa samaacadaha dhagaha ee aad raadineysay | Androidsis
Mar labaad ayaan kuu keenay dib u eegis sameecadaha wireless-ka. Laakiin markan ma wajaheyno mid uun, maanta waxaan haynaa falanqeyn ku saabsan moodel ay si weyn u rajeynayaan Mi-fans. Waxaan awoodnay inaan tijaabino kuwa cusub maalmo kooban Redmi Buds 3 Pro wax walbana waan kaaga warramaynaa.
Kuwa horeyba si fiican u yaqaana Xiaomi, qalab cusub oo ka socda shirkadda ayaa leh rajooyinka sare ee tayada iyo qiimaha. Iyo kuwa aan wali fursad u helin inay lahaadaan qalab saxiixa, Buds 3 Pro waa fursad aad u fiican oo sidaas lagu sameeyo.
1 Buds 3 Pro, iyagu ma aha oo kaliya nooc kale
2 Furitaanka Redmi Buds 3 Pro
3 Buds 3 Naqshadaynta Pro
3.1 Eedaynta Kiiska Buds 3 Pro
4 Dhamaan tikniyoolajiyaddii aad filaysay
5 Sifooyinka farsamada
7 Fikirka Tafatiraha
Buds 3 Pro, iyagu ma aha oo kaliya nooc kale
Sidaad ogtahay, barnaamijka 'Androidsis' waxaa jira sameecado badan oo dhagaha la galiyo oo aan nasiib u yeelanay inaan isku dayno. Qof kastaa wuxuu leeyahay wax wanaagsan, waxaanan had iyo jeer helnaa sabab ay ugu qalmaan. Midka asalka ah, kan ugu caqliga badan, midabka badan ama xitaa kan ugu raqiisan. Iyada oo Redmi Buds 3 Pro, ay dhowr sababood oo aad ka heli doonto inay noqdaan hanashadaada xigta.
Noqo qofka ugu horeeya ee hela Buds 3 Pro la rasiidh raqiis ah
Mararka qaar waxay umuuqataa, in la arkay hal nooc oo sameecadaha dhagaha ah, lana wada arkay. Wayna adag tahay in la gaaro qodob ka duwanaantiisa inta kale oo dhaafaysa midab ama qaab. Redmi Buds 3 Pro waxay ku guuleysteen inay ka soo baxaan inta kale qaabeynta mahadsanid isticmaalka qalabka qaab aan caadi aheyn.
Xaqiiqdii, waxa ugu horreeya ee ka muuqda naqshadeynta waa qaybta taabashada ee laga tagay dhegta. Lagu soo saaray a dhalaalaya, balaastik translucent u eg galaaska taasina waxay siisaa qalabka a muuqaal aad u sarreeya. Shaki la'aan, waxay ka soocan yihiin xulashooyinka intiisa kale inay yeeshaan sawir ka duwan dhammaan kuwa aan awoodnay inaan isku dayno.
Furitaanka Redmi Buds 3 Pro
Waxaa la joogaa waqtigii la eegi lahaa sanduuqa sanduuqyadan dhegaha lagu dhegaysto ee muddada dheer la sugayay. Kama gudbi karno fursadda aan uga hadalno arrimaha ku saabsan baakadaha Mi, sidii had iyo jeer Calaamadee farqiga leh karti iyo tayo iyo waxqabad. Wax yar ayaan kuu sheegayaa, isbeddel ahaan, waan helnay wax kasta oo aan rajeyn karno. Hadana haddii aadan rabin inaad intaas ka badan sugto, dalbo Buds-kaaga 3 Pro hadda qiimaha ugu fiican Aliexpress.
La kiiska ku amraya, taas oo kiiskeenu yahay midab wanaagsan oo midabkeedu wanaagsan yahay. Gudaha waxaa ku jira sameecadaha dhagaha laftooda. Intaa waxaa dheer, waxaan leenahay dukumiintiyada isticmaalka aasaasiga ah iyo damaanada sheyga. Ugu dambeyntii, ka ku amraya fiilada, kaas oo markan leh qaabka Nooca USB C, iyo saddex xirmooyinka dheeraadka ah oo kala cabir duwan.
Buds 3 Naqshadaynta Pro
A priori, kahor intaadan awoodin inaad tijaabiso, qaabeynta Buds 3 Pro waxay maamushaa soo jiidashada dareenka. Oo waxay u sameeyaan sababtoo ah muuqaalka asalka ah ee ay la muujinayaan adeegsiga "quraarad" tarjume ah oo dhalaalaysa aagga taabashada ee dhagaha. Shaki la’aan guul taasi waxay ka dhigeysaa kuwo soo jiidasho leh oo dhameystirkooda waxay ka dhigeysaa inay yihiin halyeeyada suuqa.
Buds cusub 3 Pro waxay leeyihiin a Qaabka "Dhegta", waxayna adeegsadaan suufka caanka ah ee kiciya fikradaha noocan oo kale ah. Runtii waxay leeyihiin cabbir yar, mar alla markii la dhigo waxay muujinayaan oo keliya qaybta ay ku yaalliin kontaroolada taabashadu. Khibradda adeegsaduhu wax badan ayey hagaajin doontaa haddii aan ku isticmaalno "gummies" ku filan ee sida ugu fiican ugu habboon anatomy, wax sidoo kale waxay hubin doontaa haysasho sugan.
Waxaan leenahay a Awoodda lacag bixinta ee 35 mAh ee dhegaha kasta taas oo noo ogolaaneysa inaan ku raaxeysano ismaamul ka ilaa 6 saacadood oo ciyaaro ah sii soco. Tani had iyo jeer waxay kuxirantahay heerka mugga aan isticmaalno iyo haddii aan firfircooneyn joojinta buuqa. Wax walba oo aad ka raadineyso dhagaha, iibso miisaankaaga 3 Pro la rasiidh qiimo jaban.
Eedaynta Kiiska Buds 3 Pro
Haddii aad eegto kiiska lacag bixinta, waxaa lagu dhammeeyaa caag la safeeyey oo leh taabasho "fiican". Cabirku waa mid ku habboon in had iyo jeer lagu qaato jeebka meel kasta. Waxay leedahay dabool magnet si had iyo jeer ay u xirnaato si dhammaystiran culeyskuna waxtar u leeyahay. Dhinaca hore waxaan ka helaynaa badhanka iswaafajinta oo leh taleefannada casriga ah ee aan u isticmaali doonno hal mar oo keliya.
Waa inaan dhahno marka la fiiriyo qaabka dheer ee kiiska lacag bixinta, iyo in dhagaha la galiyo dusha sare iyadoo kiiska si qumman loo taagan yahay. Taas macnaheedu waxa weeye in dhawrka jeer ee ugu horreeya aynaan aad u caddayn halka mid waliba u socdo. In kasta oo tani ay tahay wax aan dhowaan xakameyn doonno.
Qeybta hoose waxaan ka helaynaa rarka dekeda, kaas oo sidii la filaayay, la yimaada Qaabka USB Type-C. Waxay leedahay a 470 mAh awoodda lacag-bixinta oo waxaan ku haysan karnaa 100% kharashkaaga 2 saac iyo badh kaliya.
Dhamaan tikniyoolajiyaddii aad filaysay
Waxay ahayd in lafilo in dhagaha dhagaha ee Redmi Buds 3 Pro ay lahaan laheyd Tiknoolajiyaddii ugu dambeysay, oo waa sidaas, waxba kama maqnaan doontid Waxaan helnay farsamada Bluetooth 5.2 bixinta a isku xirnaan aad u deggan illaa 10 mitir fog. Intaa waxaa dheer, way noo oggolaan doontaa iskaga xiro dhagaha sameecadaha laba aaladood isku mar. Hadaad ku qanacday hel qaar ka mid ah Buds 3 Pro laga dhimay Aliexpress.
Waxa kale oo ay iftiimineysaa farsamada joojinta buuqa smart. Waan helnay saddex hab oo kala duwan midkee laga dooranayaa. Laakiin sameecadaha dhagaha laftoodu waa awood u leh inuu ogaado heerka dhawaaqa si aad u dalbato qaabka ku habboon. Way helayaan yaree ilaa 35 dB ee codka daarmaya. Mahadsanid saddex makarafoon iyo a Algorithm gaar ah ayaa si gaar ah u sifeeya buuqa asalka.
Mid kale oo ka mid ah awoodaha taasna muhiim ayey u tahay inta badan "cayaartoyda" waa taas Buds 3 Pro waxay leedahay qaab "ciyaar" ah. Waxaan ku shaqeyneynaa waan helnaa hoos u dhig daahida illaa 69 milliseconds. Ma seegi doontid hal faahfaahin oo ka mid ah ciyaaraha aad ugu jeceshahay casrigaaga, kombuyuutarkaaga, ama kaniinigaaga. Y waxay si fiican ula wadaagaan MIUI mahadsanid xiriirka dhakhsaha leh ee pop-up.
Ugu dambeyntiina, wax aan ka caawin karno laakiin ogeysiis waa is-maamul. Iyada oo Buds 3 Pro waxaan ku dhagaysan karnaa muusikada ilaa 28 saacadood iyada oo aan loo baahnayn isku xidhka lacag-bixinta. Kharash buuxa oo batteri ah ayaa na siinaya ilaa 6 saacadood oo aan kala go 'lahayn loo maqli music ama taxanaha aad ugu jeceshahay.
Tusaale Buds 3 Pro
Masaafada Ilaa 10 mitir
Smart ANC Saddex qaab ayaa la heli karaa
Madax-bannaanida horas 28
Kiiska batteriga 470 Mah
Waqtiga lacag bixinta headphone 1 saac
Kiiska waqtiga lacag bixinta horas 2.5
Lacag deg deg ah 3 saacadood oo la isticmaalo 10 daqiiqo
Qaab xamuul ah Nooca USB C
Lacag la'aan wireless Haa - Qi
Miisaanka dhagaha 4.9 g
Miisaanka kiiska 55 g
Xiriirinta wax iibsiga Buds 3 Pro
Naqshad muuqaalka asalka ah iyo midka sare
Lacag la'aan wireless la jaan qaada Qi
Naqshad iyo muuqaal
Wax yar dareen leh sida loo geliyo kiiska
Qaabka dhegaha iyo "gummies"
Ku habboon kiiska
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Redmi Buds 3 Pro, falanqaynta, qiimaha iyo ra'yiga